★မြန်မာ့အလင်း★: ကုလားဖင်ရက်များနှင့် တာဝန်မဲ့သူများ
မွတ်ဆလင်တွေဟာ သူတို့ဘက်က တခြားဘာသာဝင်တွေအပေါ် မတရားလုပ်ရင်ဘယ်တုံးကမှ ဟန့်တားမှု.. ရှုံ့ချမှုတွေ မလုပ်ကြပါဘူး။ ရုရှကလေးတွေကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ခံခဲ့ရတာ ကုလားတွေက မသိဟန်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့မွတ်ဆလင်တွေ ခံရပြီဆိုရင် ဘယ်သူက ပြဿနာစလဲ.. ဘယ်သူကမှားလဲဆိုတာကို မလေ့လာပါဘူး။ မွတ်ဆလင်ဘက်ကနေ ပါခဲ့ပါတယ်။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ တရားမျှတမှုဆိုတာ လုံးဝကို မရှိပါဘူး။ တကယ့်ကို လူရမ်းကားအမူအကျင့်ပါပဲ။ တရုတ်ပြည်မှာ တရုတ်-ကုလားအဓိကရုဏ်း စဖြစ်ခဲ့တာက တရုတ်မလေးကို စုပေါင်းမုဒိမ်းကျင့်ရာကဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုလားတွေကတော့ တရုတ်ကိုပဲ အပြစ်တင်ပြီး တရုတ်တွေ ရက်စက်တယ်ဆိုတာပဲ သတင်းတွေလွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ ကုလားတွေ ခွေးကျင့်ခွေးကြံနဲ့ သူများသားသမီး ဖျက်ဆီးတာကိုတော့ လုံးဝအပြစ်မတင်ခဲ့ပါဘူး။
အခုလည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ မြန်မာ့အနွယ်ဝင်တွေရဲ့ မြေကိုလုရာကနေ အဓိကရုဏ်းဖြစ်နေတယ်တဲ့။ တကယ်တော့ ကျုပ်တို့မြို့လယ်ခေါင်မှာ ဆူးလေဘုရားမြေကိုလုပြီး ပလီဆောက်ထားတာ ဒီနေ့အထိ ခမ်းခမ်းနားနားမြင်ရဆဲပါ။ သူများပစ္စည်းကို လုယူခိုးဝှက်ဖို့.. ဓါးပြတိုက်ဖို့ မိုဟာမက်က ပြောဆိုဆုံးမခဲ့တာပါ။ အင်မတန်ကို အောက်တန်းကျပြီး ယုတ်ညံ့တဲ့ အယူဝါဒီတွေပါ။ အခုကိစ္စမှာ မြန်မာဆိုတဲ့ကောင်တွေ ဘာလုပ်နေလဲ ကြည့်ကြရအောင်။
နအဖက မတရားဘူး.. လူမဆန်ဘူးဆိုပြီး စောက်တင်း နေ့စဉ်ပြောနေတဲ့ ဒီမိုသမားတွေ… ငါတို့မြန်မာတွေကို ကုလားတွေ မတရားလုပ်တာကို လုံးဝအသံမထွက်ရဲပါဘူး။ ဒီမိုသမားတွေဟာ တရားမျှတမှုကို လိုလားတဲ့သူတွေ မဟုတ်ပဲ မြန်မာအချင်းချင်း အတင်းပဲပြောချင်သူတွေဆိုတာ မြင်သာပါတယ်။NLD နဲ့ ဒီမိုသမားတွေ ချေးပေါက်ရင်တောင် လေထုညစ်ညမ်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီး အပြစ်ပြောတဲ့ နအဖကောင်တွေ… ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက မြန်မာတွေကို နှိပ်စက်နေတာ ဘာမှမပြောရဲပါဘူး။ သေနတ်ကိုင်ပြီး မြန်မာအချင်းချင်းပဲ အနိုင်ကျင့်ရဲတဲ့ အိမ်ကျယ်အခြောက်တွေပါ။ ကုလားကိုကြောက်တဲ့သူတွေနဲ့ ကုလားဖင်ရက်သူတွေပဲ နိုင်ငံရေးလုပ်နေတာလား? ဘလော့တွေမှာ စာတွေလိုက်ဖတ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေကရော… အခုကိစ္စမှာ ဘာများလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားလဲ? အစဉ်အလာမပျက် လက်ပိုက်ကြည့်နေမှာလား? အိမ်ကျယ် နအဖ၊ အိမ်ကျယ်ဒီမိုတွေနဲ့ ဘာမှ တာဝန်မယူလိုတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသုံးမကျပုံနဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကို ပြုပြင်မှကိုဖြစ်တော့မယ်နော်။
အခုဆောင်းပါးဖတ်နေတဲ့ ခင်ဗျားလဲ . . . . ပြည်သူတစ်ယောက်ဆိုတာ သိပါ။ ခင်ဗျားဟာ ဘာမှ မလုပ်ပဲ ဖြစ်ပျက်နေတာကို ဆက်လက်ပြီး လက်ပိုက်ကြည့် သွားမှာလား? စဉ်းစားပါဗျာ။ မွတ်ဆလင်ဝါဒကို အမြစ်ဖြုတ်ဖို့ခင်ဗျားတို့က အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့်မကူညီဘူးဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ မျိုးဆက်တွေဟာ အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်မယ်နော်။ သတင်းကို ဖတ်ကြည့်ပါဦးဗျာ။ (စစ်တကောင်း တောင်တန်းနယ်တွင် ကာဖျူးထုတ် တိုက်ခိုက်မူ အတွင်း အနည်းဆုံး ဒေသခံ ၅ ဦးထက် မနည်းသေဆုံး)
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 1:37 AM
Lord Monckton on RT - Global Warming : Biggest Fra...
မွတ်ဆလင်တွေ လေ့လာနေတဲ့ ငါတို့မြန်မာ့သိုင်း
9/11 ဓါတ်ပုံအသစ်တွေနဲ့ ကြက်တူရွေးတွေကို ဟာသလုပ်ကြစ...
Allahက မွတ်ဆလင်တွေကိုပဲ ဒုက္ခနဲ့ သောကတွေ ပေးပါတယ်
DVBYV 03.04.2009 - Burmese Martial Art show
Allahက February 11 မှာ မွတ်ဆလင် 19ကောင် လမ်းဘေးမှာ...
ကုလားချစ်တဲ့ Allahက February 10 မှာ မွတ်ဆလင် 200ကု...
A Message From Transport Canada - Rick Mercer Repo...
ခရီးသွားသော မိန်းခလေးများ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားအံ့
1987 French Bando!
ကုလားတွေက မျှတမှုနဲ့ အပြန်အလှန်လေးစားခြင်းကို မြတ်...
အပြန်အလှန်လေးစားမှု ဆိုတာ ..ဒီလိုပဲလား..
February5မှာ Allahဆန္ဒအတိုင်း မွတ်ဆလင်အချင်းချင်း...
ဗုဒ္ဓ္ဓဘာသာပါဆိုတဲ့ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးမှ taxi သမားမျ...
ကုလားချစ်တဲ့ Allahက February4မှာ မွတ်ဆလင် ၆ ကောင...
ကုလားချစ်တဲ့ Allahက February3မှာ မွတ်ဆလင် 25ကောင...
Bodhi Tree Forest Monastery and Retreat Centre
ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ခရစ်ယာန်တွေကိုလူလို သဘောမထားဘူးတဲ့